Caalamka, 13 December 2019
Khamiis 13 December 2019
Maanta oo khamiis ah, 12 December, sanadka 2019-ka waxaa guud ahaan dalkan Britain ay shacab codadkooda ka dhiibanayaan doorasho nooceeda aan horay loo arag tan iyo dagaalkii labaad ee dunida.
Turkey oo u digtay dalalka badda Mediterranean-ka
Turkey ayaa maanta ka digtay inay dalalka kale ka hor-istaagi doonto in ay sahmin iyo gaas qodis ka sameeyaan bariga badda Mediterranean-ka, fasax la’aanteeda.
ICC oo furtay dacwad ay dalalka Islaamka ka gudbiyeen Myanmar
Warbixin ku Saabsan ka Hortagga Tacaddiga Haweenka
Soomaali lagu Dhaawacay Magaalada Toronto
Hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii la rasaaseeyay gaari ay saarnaayeen saddex qof oo ay Soomaali ku jirto oo marayay xaafadda North York ee magaalada Toronto ee dalka Canada.
Macallimiinta Canada oo Shaqa Joojin Galay
Macallimiinta dugsiyada sare ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sameeyay shaqo joojin kadib markii dowladda gobolka ay sheegtay in la kordhinayo tirada ardayda ay ku fadhiistaan fasallada. Waxay kaloo ka cabanayaan lacago laga jaray, taasi oo saameyn ku yeelatay ardayda.
Madaxa Midowga Yurub oo Booqaneysa Ethiopia
Dad lagu laayay Ciraaq
Saraakiisha dalka Ciraq ayaa sheegay in tirada dadki Jimcihi lagu dilay bannaanbixi Baghdad ay hadda gaartay ugu yaraan 20 qof, halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafeen 230 qof.